Zelalem Jemaneh fi Hiriyoon isaa Mulatu Haile, Takaale Gabiisa, Fufi fi Abban Dama (Malakun) Saba Manasibu irrati bara 2005 yakka raawwatan keessa murasa:
Seenaa guyyaa na gaafatan keessati #Saamuel Taakola kan jedhamu ogaana abbaa cibiraati jedhama. ergaa waraani bilisumaa oromoo bittinaa'e biyyaa ba'uuf dirqaame booda humna muraasa waliin lolee lolchiisa naanno begii fi mandii keessa soso'aa ture. humni isaan ogaanamu waraana TPLF boqonaa dhorkee. sakaata'a waraani tigiree yeroo garagaraa taasisen to'atamu hin dandeenye. waraani TPLF toofta jijiirate gantoota akka #Mamud mamad alii (sanyiidhaan faalaxaa) ta'ee fi Milishaa opdo kan ta'ee Abbaa Zinaab kan jedhamu fayadamuun haaxxe inni keessa ba'uu hin dandeenye qopheesanif. abbaan zinaab kun yeroo san nama saabonuma qabuu ture. madhee #Jaal Saamuel ijaare keessas miseensa madhee maxaari ture.
Kanaaf namoota inni biraa madheefatu keessa tokko ture. akkasuma Mamum mamad Alii waliin illee hariiro gabbaata qabu turaan. wayaanenis bobbaa fi galaa isa waan hubaatef namoota kanati fayaadamte. gaafas dabbaaloni wayaane Alamuu kan jedhamu yeroo sana hojjeta qonnaa kan turee fi ammaa itti gaafatama dhimmaa nageenya fi security kan dhihaa wallagaa kan ta'ee fi dabbalicha Takaale Gaabisa, Abduulayi Danuu isa waliin mana mamud mamad aliiti galafaatan. kun bara 1990 ALH ti. kan lammaata ammoo #Gamachiis Birraasati. namni kun sochii inni qabsoo bilisumaa keessati qabaacha ture namooni keessa beekan gaafa dubaatan nama gahuumsan dirqaama oromumaa isaa ba'achaa ture ta'uu afaan guuttani dubbatu.
Waraana bilisumaa murnaa qeerranso keessati ga'uumsa ga'aa qabaacha waan tureef kanneen ga'oo ta'anii gara yeeyiti darbaan ture. booda innis addaan faca'ani booda hireen isa biyyaa keessati hafuu taate. kan jedhamu Gamachiis akka fedhii isaatin biyyaa keessati hafeetu himama. kanafiis kan ragaa ta'uu hanga gaafa wareegamuti hidhaano isaa hin hiikane ture. innis madhee ijaaru fi kan ijaaraman jajabeesa akkasuma humna addaa tarkaanfi fudhaatus ta'ee tajaajila ture. bara 1991 ergaa Taamiru Gudata namni jedhamu document maqaa miseensota madhee mana sibuu keessa turaani fi saabontota hedduu qabaate ture dabarsee diinaf kenneti kaan hidhaati kaan biyyaa baqaachuf dirqaamani booda hamiilen inni qabsoof qabu harkaati laaffate. namooni inni waliin socho'us hidhaati waan guraamaniif sochiin isa gufuudhaan guutame. innis yeroo kana namoota ergamaa diinaf bobaa'an saamu, akkasuma qabeenya fi maati isaani irraati tarkaanfi boonsa fudhaachu eegale. yoowana gantooni fi ashkaaroni wayaane kan ani maqaasani yaadadhu keessa
1. Malkaamu olaana- kan isaa rasaasan ajjeese
2. Mamud Tarraafa- miseensa raayya ittisa biyyaa keessa sooroma kan ba'ee yeroo saniiti
3. Girmaa Xilahuun- milishaa ganda kan turee
4. Alemu- kan armaan duraati maqaa xuqee fi du'aa Saamuel keessa nama harkaa qabu san fa'ii isaan kanan yaadadha. #Malkaamu Olaanati kan ajjeese. bara 1993 keessa waqtii bonaa keessa naanno lagaa kongiiliti wareegame. gaafa inni rasaasan rukutaame fidaani Benguaa dhufaan sana ijaa kootinan argee. dugdaa isa duuban Mo'oo isaara rukutaan. itti sirbaas turaan. mandiiti geessani achiiti lubbuunsa dabartee. iddoo awaalcha isaas maati isa dhoksaan hanbiisan.
Kan biroon ammoo miseensa WFDO ture. barrattaa kolleeji daandi boruu ture. dargagoo saabonuma jabaa qabu fi seena boonsa qabsoo oromoo keessati qabu fi bara baraan qeerro fi hawaasa mana sibuun yaadatamudha. Dargagoo Ebiisa Beekumatti . innis ajajaa Taakaletin milishootan gandaa wanashaa daabbusiti bara 1998 wareegame Ebiisa Beekuma. Ebiisan kan gaafa waajjira WFDO benguaa fuulduraa Alaaba buuse Malkaamuti kenne saniidha yoo yadatanfi. Dargagoon saboonan Miseensi WFDO kun harka OPDOti wareegamee.
Falannoo bara 2005 fi Fincili Dida Gargbumaa bara sun adeesifamee lubu heedun kan itti wareegame yoo ta'ee ilee moormitoon uumani mootummaa dura dhabatan ifati falmachuu kan barsisan fi uumatii ilee ifati didaa fi fincilma mootummaa irrati adeemsisu bara itti danda'eedha. Namii bara 2005 filannoo keessa darbee yom iyuu wayanee hin sodatu. Namoon Suuran isaa mulatuu kun heedun isaa lubun kan hin jire dha akka:
1. Addamuu Baqala nama Maatii isaa birrati mana isaati Gunfti kan ajeefamee. Sadaasa 2005 ,
2. Brihane Dhufera Angosi FDG irrati kan Kiltu Karati ajeefamte. Sadaasa 2005 Manasibu fi Kiltu Kara FDG
3. Isqeal Gamada FDG irrati rassasa morma rukutamee kan ajeefame. Sadaasa 2005 Manasibu fi Kiltu Kara FDG
4. Damayee Olana, Abdi Umata fi Ifee Mardasa wara rassan tuimaman haalaa haman qama hirtani dha
fi kan jira ilee qama kan hirtan fi yeero sana damaima wagga 15 Police lama irratese rebidee jeedhamtee hidha turte faatuu keessati argama. Suuran kun seenan isaa Kitaba seena Oromoo keessati galma'uutu irrati bareefamuuf deema. Fincilii fi falamiin uumataa Oromoo Asosa dha hanga Babileeti Waloo dha Hanga Boranati gegefamee fi lubu heedu itti wareegamee calisamee bira hin darbamyuu..
Yakka Zelalem Jemaneh fi Hiriyoon isaa Mulatu Haile, Takaale Gabiisa, Fufi fi Abban Dama (Malakun) Saba Manasibu irrati bara 2005 raawwatan keessa murasa:-
1. Uumata Gunfii kuma 5- 10 ta'uu irrati nama 4 ta'aan walgaii irrati Kilachi - AK47 dhan sa'aa tokko gutudubartoota ulfa fi ijoolee irrati rassasa robsisee,
2. Utuu Hin turin nama Walgaii sun Qindeese obbo Adamuu Baqala Mana jireenya isaati ijoolee fi haadha mana isaa birrati rassanbulchitoon Manasibuu akka ajeesan goodhe qabeenya isaa samsise;
3. Guyya tokko Booda baratoota FDG hirira Qilxuu Karaa irrati ba'aan gegesaa turan keessa nama 4 ajeesise, nama 8 Mada'aan suuran isaa kana gadii jira.
4. Mucaa durba wagga 13 dabalatee nama 20,000ideesaa, Sanqalee, Mandi Kampy waraana , Qilxuu Kara fi Gimbiti hidhee darara ture.
5. Bishan Magala Manditi Sumii Niqisisuun Baratoon Mana barumsa bishan kana dhugan bala hamaf saxilaman lubun darbesi jira;
6. Zelalem Jemhane Lixaa walaggati samicha gudaa gegesa kan ture yamuu ta'uu, amala isaa kana Finfinne fudhatee dhufee lafa qootee bula gugurun samicha hama nama gegese dha.
7. Zelalem Jemane barumsa tokko Malee tera Polisi irra ka''ee Bulcha Lixaa wallaga ta'uu kan danda'eee uumata ajeesuu fi ajeesisun gara jibina gudan Oromoo midhu isaatiin.
8. Zelalem Jemaneh Yakka ajeecha fi samicha hunda kana kan raawacha ture Hiriyoota fi degertoota isaa Mulatuu Haile, Abba Dama (Malaku) fi Fufi nama jeedhamu fi kan biroo ilee waliin ta'uudhan. Namoon kun ama illee hoji walfakata samichaa fi ajeecha uumata irrati raawacha jiru.
9. Waluma Galati bara 2005/1997 Lixa wallaga keessa ajeecha fi hidha hama raawatama ture Ajeecha baratoota Inanigoo, Bojii, Gimbi Dambi Dolo, Begiti raawatame hundaf kan gaafa tokko gaafatamu Zelalem Jemaneh fi hiriyoota isaati.
10. Samicha Zelalem Jemaneh Lixa Wallagati raawwatee seeran addati qooratamuu qaba, Bugdt raamadama ture tokko ilee hoji irra hin olee, abbootin qabeenya ABO dha jeedhe soban yakke sama ture.
Zelalem Jemanhe akkasi nu ajeese Ango Argatee, Abba dhabne guma keenya badee hafee, Waqayoo yeeroo isaa egatee gumma keenya ni basa,
G/B bakka jiru irra